ကြက်သားရည် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မြေသားအမဲသားနှင့်အတူ taco သို့ကျဆင်းလာများအတွက်စာရွက်
ကြက်သားရည် လွယ်လွယ်ကူကူအရသာရှိတဲ့နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဟင်းချိုပါတကား! တင်ဒါ မြေပြင်အမဲသား meatballs , ခေါက်ဆွဲ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးနှင့်အမဲသား၊ ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းရည်တို့ကိုအတူတူချက်ပြုတ်ကြသည်။ အရဟင်းချိုနှင့်တူသောအရသာရှိသည့်ဟင်းချိုတစ်လုံးကိုတီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီ meatball ဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည် မိနစ် 30 ညစာစာလိပ် ငါသည်ငါ့ဇွန်းနှင့်အတူမရနိုင်သမျှတက်စိမ်ရန်။ ဒါဟာအဆုံးစွန်သောဆောင်းတွင်းမုန့်ညက်ပါ!
ငါဟင်းချိုလုပ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဆောင်းရာသီဟာဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်းအသစ်တွေကိုစမ်းဖို့အကြွင်းမဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ပါ။ ဤသည် meatball ဟင်းချိုကအမှန်တကယ်ဝမ်း - နွေးဖြစ်သကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းငါ့မိသားစုရဲ့မုန့်ညက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာနေသည်!
Meatballs သည်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်သည် စပျစ်သီးဂျယ်လီ Meatballs တစ်ခု appetizer အဖြစ် Crockpot Meatballs ညစာအတွက်! ဒါ့အပြင်ဒီခရမ်းချဉ်သီး Meatball Soup လိုမျိုးဟင်းချိုမှာတွေ့နိုင်တယ်။
သူတို့ကဒီလောက်ပိုကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့အတွက်အိမ်လုပ် meatballs တွေကိုငါသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တိုအတွင်းမှာအစားအေးခဲတဲ့ meatballs ကိုသုံးနိုင်တယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုနှစ်သက်ပါကအသုံးပြုပါ တူရကီ Meatballs အမဲသား၏အရပျ၌။
ငါဒီတစ်ခုကဲ့သို့လွယ်ကူသောတစ်ဟင်းချိုကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီမထင်ကြဘူး! အထူးသဖြင့်သင်အသုံးပြုလျှင် Pre- လုပ် meatballs (စတိုးဆိုင်ဝယ်သို့မဟုတ်အိမ်လုပ်)!
ပြင်ဆင်ထားသော meatballs (သို့မဟုတ် prepackaged သို့မဟုတ်အိမ်လုပ် meatballs ကိုသုံးပါ) နှင့်ဟင်းရည်ထည့်ပါ။ အဆိုပါ meatballs ချက်ပြုတ်ဖို့ခွင့်ပြုရန်နှင့်အရသာရောနှောဖို့ 10 မိနစ်မျှတည်ထားပါ။
ငါသည်ဤ meatballs ပုံမှန် 1″ အရွယ်အစားလုပ်နေစဉ်, သငျသညျအရှိဆုံးဆက်ဆက်နည်းနည်း bitty meatballs လုပ် (သူတို့ကိုအီတလီမင်္ဂလာဆောင်ဟင်းချို meatball အရွယ်အစားအောင်) နိုင်ပါတယ်။ ငါ meatballs ကြီးမားသောအသုတ်ထဲမှာလုပ်သူတို့ကိုအေးခဲချင်တယ်။ အေးခဲနေသောဘောဇဉ်များ (အိမ်လုပ်သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်များ ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ) ဤ meatball ဟင်းချိုစာရွက်အတွက်ရေခဲသို့မဟုတ်ကြိုတင်ချက်ပြုတ်စရာမလိုပါ။
ဤလွယ်ကူသော meatball ဟင်းချိုအတွက်ချက်ပြုတ်ချိန်သည် ၂၅ မှ ၃၀ မိနစ်ထက်မပိုပါ။ ၎င်းသည်အချိန်တင်းကျပ်စွာလျှင်မြန်စွာပြုလုပ်သော၊ သို့မဟုတ်လျှင်မြန်စွာပြုလုပ်သောနေ့လည်စာပင်လျှင်အပြည့်အ ၀ သီတင်းကျွတ်သောညစာဖြစ်သည်။
Meatball ဟင်းချိုသည်အိပ်မက်တစ်ခုလိုအေးခဲနေသောကြောင့်အလုပ်များသည့်အားလပ်ရက်များ၌အမြန်ထမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစားသုံးခြင်း၌အေးခဲခြင်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်သည် (အေးခဲသောအခါခေါက်ဆွဲကိုကျော်ပြီးအပူပေးစဉ်တွင်ထည့်သည်။ )
လွယ်ကူသော Crock Pot Ham နှင့်အာလူးဟင်းချို
ဟမ်ဘာဂါဟင်းချို - ဂန္ထဝင်!
အမဲသားစွပ်ပြုတ်စာရွက် - ပြီးပြည့်စုံသောရာသီဥတုအေးသောစွပ်ပြုတ်။
Tuscan ဟင်းချို - Copycat စာရွက်!
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၂၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson Meatball Soup သည်ဖြည့်စွက်အရသာရှိသောအလွန်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောကျေနပ်ဖွယ်ရာဟင်းချိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအမဲသား meatballs, ခေါက်ဆွဲများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောနှောနှင့်အမဲသား, ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းရည်အတူတူချက်ပြုတ်နေကြသည် luscious ဟင်းချိုကိုဖန်တီးရန်, ကပြောသည်အတိုင်းအမှန်တကယ်ဘောဇဉ်ကဲ့သို့စား! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢1 ½ အလေးချိန်ပေါင် အမဲရောင်ဘောလုံး အေးခဲသို့မဟုတ်အိမ်လုပ်
▢၆ ခွက် အမဲသားဟင်းရည်
▢၂၈ အောင်စ diced ခရမ်းချဉ်သီး undrained
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း အီတလီရာသီ ကြိုက်တယ်
▢⅔ ခွက် လက်တွေ ဒါမှမဟုတ်မုယောစပါးကျီ
▢နှစ် ခွက် အေးခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ကြီးမားတဲ့ပြီနောက်ဟင်းသို့မဟုတ်အိုး saute ကြက်သွန်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူ၌တည်၏။
ပြင်ဆင်ထားသည့် meatballs များနှင့်အမဲသားဟင်းရည်များကို ၁၀ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ အရသာ၊ ခေါက်ဆွဲနှင့်အေးခဲနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်ပါ။ မျှတည်ထားပါ 15 မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်သည်အထိ။
သော့ချက်စာလုံးmeatball ဟင်းချို သင်တန်းအဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။